आश्वासन समितिका ७ प्रश्न, गृहमन्त्रीले के दिए जवाफ ?
१३ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले सोमवार गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई संसदमा दिएका आश्वासनका सन्दर्भमा के भइरहेको छ रु भनेर सोध्न बोलाएको थियो ।
दोस्रो अधिवेशनमा गृहमन्त्रीले दिएका आश्वासनहरुबारे प्रश्नावली तयार गरी समितिले पहिले नै गृहमन्त्रीलाई पठाएको थियो ।
समिति सचिवालयले तयार पारेको प्रश्नावलीको मस्यौदामा कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको २०७५ साउन १० गते बलात्कारपछि हत्या भएको सम्बन्धमा के भइरहेको छ रु भन्नेदेखि विपद्पछिको राहत तथा उद्धारका कार्यहरुलाई समेटिएका छन् ।
गृहमन्त्रीलाई समितिले सोधेको प्रश्न र गृहमन्त्रीले दिएको जवाफ यस्तो छ ?
प्रश्न १ ,छाउपडी प्रथा एक सामाजिक विकृति, अन्धविश्वासको रुपमा रहेको र यो समस्या समाधानका लागि सामाजिक जागरणमार्फत महिलाहरुलाई सचेतना जगाउन मन्त्रालयले के कस्ता कदम अगाडि बढाएको छ रु साथै, छाउपडी प्रथालाई हटाउने कानुन प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा के भइरहेको छ ?
गृहमन्त्रीको जवाफ स् छाउपडी प्रथा अन्धविश्वास नै हो । यसलाई अन्त्य गर्न प्रहरीले ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । ‘समुदाय–प्रहरी कार्यक्रम’ अगाडि बढाएको छ । केही महिनादेखि यो कार्यक्रम चालु छ । ७५३ वटै स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि करार भएको छ ।
प्रश्न २ , कञ्चनपुर जिल्लास्थित भीमदत्त नगरपालिका २ निवासी निर्मला पन्तको मिति २०७५ साउन १० गते बलात्कारपछि हत्या भएको सम्बन्धमा छानविन प्रक्रिया के भइरहेको छ ?
गृहमन्त्रीको जवाफ स् कतिपय अनुसन्धान बर्षौ लगाएर पनि सफल भएका छन् । कञ्चनपुरको घटनाको सन्दर्भमा पनि एक बर्षदेखि बिभिन्न ढङ्गबाट अनुसन्धान भइरहेको छ । म समितिलाई यस घटनाका अपराधी उम्कन दिने छैन भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । अनुसन्धानमा लापरबाही गर्नेलाई मन्त्रालयले कारबाही गर्छ । प्रहरी अनुसन्धानलाई मन्न्त्रालयले पनि अनुगमन गरिरहेको छ । यस घटनामा सयौंलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेका छौं । र फेरि पनि भन्छु, दोषीलाई नियन्त्रणमा लिन कुनै कसर बाँकी राखिनेछैन ।
कतिपय अनुसन्धानका विषयहरु सार्वजनिक गर्न नमिल्ने पनि हुन सक्छ । समिति समक्ष अनुसन्धानका प्रक्रियाहरुका सन्दर्भमा उपलब्ध भने गराउँदछु ।
सांसद विन्दा देवी आले ९राना० को प्रतिप्रश्न– एक बर्षसम्म प्राप्त नभएको सफलता अब कसरी हासिल हुन्छ रु अबको अपराध–अनुसन्धानको रणनीति के हो रु
सांसद चन्द्रबहादुर खड्काको प्रतिप्रश्न– दिलिप सिंह बिष्ट नै दोषी भएको धेरै प्रमाणले देखाएको छ । उसलाई दोषी ठहर गर्न किन नसकेको ?
गृहमन्त्रीको जवाफ निर्मला पन्तका हत्याका सन्दर्भमा विभिन्न समिति गठन गर्यौं, सुरुदेखि नै तर असफल भए । सीआईबीका टिम पनि बनाउँदा ती पनि असफल भए । अपराधीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन सकेनन् । यो प्रकरणमा सरकारले आफ्नो काम गरिरहेको छ । तपाईंहरुले अपराध–अनुसन्धानको रणनीति के हो रु भन्नुस् भन्नुभयो रु ती विविध किसिमका हुन्छन् ।
दिलिप सिंह विष्टमात्रै होइन । अन्य संदिग्धहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर, सयौंको संख्यामा पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिएको छ । दिलिप सिंह विष्टको सन्र्दभमा पनि त्यही ९डीएनए० मिलेको छैन । धेरैलाई हाई प्रोफाइललाई जोगाउन हो कि भन्ने परेको छ । तर त्यो होइन । अहिले पनि अनुसन्धान चलिरहेकाले निचोडमा पुगिहाल्नु हुँदैन । अहिले पनि यो घटनालाई लिएर सार्वजनिक बहस भइरहेका छन् । सार्वजनिक बहसले समस्या हल हुँदैन । सुझाव त पुग्छ तर अनुसन्धान आफ्नै गतिमा अघि बढेको छ ।
यस घटनाका सम्बन्धमा नयाँ ढङ्गले अनुसन्धान अगाडि बढेको छ ।
प्रश्न नम्बर ३, हरेक बर्ष बर्षाको कारणले थुप्रै जनधनको क्षति भएको र बर्षाको कारणबाट हुने धनजनको क्षतिको घटना न्युनीकरण गर्न गृह मन्त्रालयबाट के कस्ता योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्ने सोच सरकारले बनाएको छ रु विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार स्थापना हुनुपर्ने प्राधिकरण किन स्थापना हुन सकेन ?
गृहमन्त्रीको जवाफ स् विपद जोखिम न्युनीकरण प्राधिकरण स्थापना गर्न ढिलाइ भएको छ । नियमावली नभएर पनि यसमा ढिलाइ भएको थियो । अहिले त्यो बनिसकेको छ । अब छिट्टै गठन हुनेछ । अहिले भने प्राधिकरणको काम मन्त्रालयबाटै भइरहेको छ । अहिले विपद जोखिम ऐन कार्यान्वयनमा छ ।
क्षति भएको अवस्थामा राहत दिने कार्य भएका छन् । बर्षाको कारणले हुन सक्ने धनजनको क्षति न्युनीकरण गर्न २४ सै घण्टा तयार रहने जनशक्ति पनि छ । त्यसका लागि सुरक्षा संयन्त्रहरु खटिएका छन् ।
प्रश्न नम्बर ४ , विपद्पछिको राहत तथा उद्धारका कार्यहरु अझ प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन गुल्मको ब्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा के कति प्रगति भएको छ ?
गृहमन्त्रीको जवाफ– मन्त्री यस विषयमा बोलेनन्
प्रश्न नम्बर ५ पूर्वराजदूत केशव झाको काठमाडौंको बबरमहलमा भएको हत्याको सन्दर्भमा के कसरी अनुसन्धान भइरहेको छ ?
गृहमन्त्रीको जवाफ अनुसन्धान जारी छ । आशा गरौं छिट्टै अपराधी कानुनको कठघरामा आउनेछ ।
प्रश्न नम्बर ६ , संघीय सांसदका निरुदेवी पालमाथि भएको आक्रमणको सम्बन्धमा के कसो भइरहेको छ ?
गृहमन्त्रीको जवाफ , त्यस घटनाका सन्दर्भमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । उहाँ -निरुदेवी पाल० ले दिएको सूचनाको आधारमा अनुसन्धान भइरहेको छ । उहाँले दिएको हुलियाका आधारमा स्केच बनिसक्यो । प्रहरीले अपराधी खोज्दैछ । आशा गरौं, आपराधीलाई छिटै नियन्त्रणमा लिन सफल हुन्छौं ।
प्रश्न नम्बर ७ , गृहमन्त्रालयबाट उपलब्ध गराउने आर्थिक साहायताको पारदर्शिता र न्यायिक वितरणको नीति, मापदण्ड कस्ता रहेका छन ?
गृहमन्त्रीको जवाफ स् पहिले जे जस्तो थियो त्यही नै मापदण्ड अनुसार आर्थिक सहायताको कुरा भइरहेको छ । यहाँ आर्थिक साहायताको पारदर्शिताको कुरा उठ्यो । पहिले जे थियो त्यसमा कुनै परिवर्तन भएको छैन ।
सोमबार राष्ट्रियसभाको सरकारी आश्वासन समितिले गृहमन्त्रीले संसदमा दिएको आश्वासन कार्यान्वयनबारे छलफल गरेको हो । बैठकपछि अनौपचारिक कुराकानीमा कतिपय समिति सदस्यहरु भन्दै थिए, ‘आश्वासन समितिलाई गृहमन्त्रीले आश्वासन मात्रै दिएर गए ।’